Manchester United oo David de Gea ka dhigeysa goolhaayaha ugu qaalisan kubadda cagta. – Gool FM
Manchester United oo David de Gea ka dhigeysa goolhaayaha ugu qaalisan kubadda cagta.
(Manchester) 18 Juunyo 2018. Sida ay shaacinayaan wararka ka imaanaya dalka Spain David de Gea ayaa wuxuu heshiis la gaaray maamulka kooxda Manchester United si uu u saxiixo heshiis cusub uu kusii joogayo Old Trafford.
Sida uu shaaca ka qaaday wargeyska “Marca” David de Gea ayaa noqon doono goolhaayaha ugu gaaliisan aduunka xiliyada soo aadan.
Red Devils ayaa qorsheeneysa in David de Gea ay ka saxiixato heshiis cusub ee gaarsiisan mudo 5 sano uu sanadii ka qaadan doono garoonka Old Trafford aduun dhan21 million euros.
Hadii uu goolhaayaha reer Spain u saxiixo heshiiskan cusub kooxda Red Devils wuxuu ka sara mari doonaa mushaar ahaan goolhaayaha kooxda Bayern Munich Manuel Neuer kaasoo sanadii mushaar ahaan u qaata aduun dhan 15 million euros.
Mohamed Salah oo fariin u diray jamaahiirta xulka qaranka Masar kahor kulanka Russia